11 / 06 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, Ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Metro, Turkey 0
gebze nzọụkwụ mgbanaka na oge
Map nke Marmaray na Gebze Halkalı Marmaray kwụsịrị na ndokwa: Marmaray, ọrụ ahụ jikọtara akụkụ Europe na Eshia nke Istanbul Halkalı Ịnwere ike ịchọta ozi niile gbasara nkwụsị na oge nke ụzọ ụzọ Gebze na ọdịnaya a. Halkalı Gebze Suburban Line 2019 gunyere akara ohuru ohuru n’uzo nke oru Marmaray. Odikwa n'akụkụ Europe Halkalıma malite Gebze.
Ị nwere ike ịkekọrịta map a na mgbasa ozi mmadụ site n'ịgbakwunye koodu html na saịtị gị.
Na European Akụkụ Halkalı na Kazlıçeşme na-enye njem n'etiti Marmaray na akụkụ Anatolian nke obodo ahụ.
Ndị Istanbul maara nke ọma na ụzọ mbụ nke ọrụ a bụ nke Kazlıçeşme - Ayrılık Çeşmesi nke jikọtara akụkụ Anatolian na n'akụkụ Europe.
O nwere okporo ụzọ metro kasị dị ogologo na Istanbul Halkalı - E nwere ngụkọta nke 42 na-akwụsị na Gebze metro line. 14 dị n'akụkụ Europe nakwa na 28 fọdụrụ nọ n'akụkụ Asia.
Halkalı - Gebze Metro Line Hour
Halkalı Dịka e kwuru n’elu, nkwụsị 42 dị na ọdụ ụgbọ oloko Gebze. Halkalı na oge zuru ezu n'etiti nkwụsị Gebze ga-agbada na 115 nkeji. Na nkenke HalkalıOge 115 na 1 awa na 55 awa ga-Gebze.
Halkalı - Gebze Metro nnyefe kwụsịrị
Halkalı Enwere ọtụtụ nkwụsị na-akwụsị na line Gebze Metro. Halkalı - Ị nwere ike ịhụ mpaghara ndị metro ị ga-agafe site na Gebze metro line.
Gebze Halkalı Nkwụsị nkwụsị na Metro Line Metro
Halkalı na ọdụ M1B Yenikapı-Halkalı na mpaghara metro,
N'ọdụ Ataköy na M9 İkitelli-Ataköy metro line,
N'ebe Bakirkoy na ọdụ M3 Bakırköy-Başakşehir metro,
Yenikapı-Atatürk Airport na ọdụ Yenikapı, M1A
Yenikapı-Kirazlı na M1 Yenikapı-Hacıosman metro edoro na Yenikapı Station
T1 Kabataş-Bağcılar tram line and seaways na Sirkeci ọdụ,
N'elu ebe isi iyi nke Ayrılık M4 Kadıköy-Tuzla metro line,
Na Üsküdar ọdụ, M5 Üsküdar-Çekmeköy metro line,
N'ebe Göztepe dị na M12 Göztepe-Ümraniye,
N'ọdụ ụgbọ mmiri Bostancı na M8 Bostancı-Dudullu metro,
Pendik-Sabiha Gokcen Airport nke dị na Pendik
İçmeler A ga - ejikọta ebe M4 na akara ntanetị nke Kadıköy-Tuzla.
Halkalı - Gebze Metro na YHT Ankara Connection
Halkalı Gebze Commuter Line Train Prices and Timetables 09 / 04 / 2019 Halkalı Line mgbe Marmaray Gebze anọgide na-emechi ebe ọ bụ na kpọliteghachiri n'afọ 2013 2019. Ogwe 43 Halkalı Gebze na-agbanye okporo ígwè nke 76.6 ma jiri oge 114 gaa oge. Ọ bụ ụzọ njem nke ụmụ amaala ji eme ihe Halkalı Ụgbọ njem Gebze Marmaray bụ isiokwu nke ịmata ihe. Ego ole bụ ụgbọ oloko ụgbọ elu? GEBZE HALKALI MARMARAY GAA Gebze - Halkalı E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ 41 dị na akara. Nke a bụ ụzọ nke akara; HalkalıMustafa Kemal, Küçükçekmece, Florya, Yesilkoy, Yesilyurt, Ataköy, Bakırköy, Çankaya, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar ga-agbali iji Abraham, Sogutlucesme, Feneryolu, Göztepe Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyali İdealtepe, ...
Kpọtụrụ Kpọtụrụ ozugbo Halkalı Line: 15 Otu Oge Site na Nkeji 14 / 03 / 2019 Minista na ndi isi ahia Minister Cahit Turhan, Marmaray Gebze-Halkalı elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè dị n'etiti mmalite nke ọrụ (YHT) kwuru na mgbanwe mere na oge ma na-akwụsị, "Ankara-Istanbul-Ankara mbụ nkwụsị na ikpeazụ na-akwụsị 2 2 otu ugboro n'ụbọchị n'oge nke YHT akara Halkalı Ọ bụ ọdụ. Marmaray Gebze-Halkalı Line na 06.00-22.00 awa 15 ụgbọ okporo ígwè na-etiti 142 nkeji, Sogutlucesme-Na Zeytinburnu akara 06.00-24.00 awa 8 nkeji iche 144 malitere ịzụ ọrụ. "Ọ sịrị. Minister Turhan, na ya ntule," anyị president site Recep Tayyip Erdogan, na Asia Marmaray Gebze - inye njem ụgbọ okporo ígwè na-adịghị agwụ aghara n'etiti etiti EuropeHalkalı Oge ụgbọ oloko elu na oghere nke akara okpu
Oge nhazi na nkwụsị nke Akçaray 20 / 06 / 2017 Oge a na-eme njem na-akwụsị: 11 a na-akwụsị akwụsị mgbe mmalite nke njem ahụ site na obodo Kocaeli Metropolitan na-amalite iji mee ka njem ụgbọ okporo ígwè dị ngwa Akkaaray, Kocaeli Intercity Bus Terminal na Seka Park n'etiti ụzọ ụzọ abụọ bụ ihe dịka kilomita 14,8. Enwere 4 nkwụsị na ụzọ, na 7 dị n'etiti na 11 n'akụkụ. Isi: www.mavikocaeli.com.tr
Ụgbọ USB Tünektepe na-ebugharị puku 30 ọtụtụ puku
Plateaus na Oké Osimiri Ojii na-ejikọta ya na Ụzọ Green Road
Oge nhazi na nkwụsị nke Akçaray